Mitady Fanampiana Ho An’ireo Niharam-boina Noho Ny Rivodoza Sidr Ireo Blaogy Bangla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 6:43 GMT
Dimy andro taorian'ny nandravan'ny rivodoza Sidr an'i Bangladesh, mitohy mitobaka ireo voavao mikasika ny faharavàna. Na teo aza ireo fepetra noraisin'ny fanjakana mba hamindrana ireo olona marobe sy hametrahana azy ireo amin'ny toerana azo antoka, efa mihoatra ny 3 000 mahery ny isa ofisialy mikasika ireo olona maty.
Araka ireo antontan'isa navaozina nentin'ny DMCR (Disaster Management and Control Room) ao Dhaka, manodidina ny 1 054 tapitrisa ny isan'ireo fianakaviana niharan'ny rivodoza Sidr. Tamin'ny andron'ny omaly, trano manodidina ny 300 511 no rava tanteraka ary 626 000 no nahitàna fahasimbana amin'ny ampahany.
Fianarana manodidina ny 792 eo ho eo no potika tanteraka ary 4 393 no simba amin'ny ampahany. Làlantany manana halavàna manodidina ny 57 kilometatra (km) no simba, ary arabe 58km no simba tanteraka, raha toa arabe 87,948 km no simba amin'ny ampahany. Miaraka amin'ny hoe efa manangasanga ny fotoana fijinjàna, niharan'ny fandravan'ilay rivodoza ihany koa ireo vokatra. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny fanjakana, potika tanteraka ireo vokatra teo amin'ny tany manana velarana 11887 hektara mahery ary maherin'ny 346218 hektara kosa no simba amin'ny ampahany.
Milaza ireo olom-panjakana fa andro vitsivitsy no ilaina hahitana ny fanombanana feno an'ireo fahavoazana mikasika ny aina sy ny fanànana nianjera teo an-toerana.
Mandritra izany fotoana izany, misaringotra atsy sy aroa ireo mpamonjy voina, miezaka mitady sakafo, fanafody, rano fisotro, sns ho an'ireo tràboina tamin'ilay rivodoza. Kanefa, betsaka no mila atao amin'izany ary ato ho ato. Mandona haingana sy misafoaka ny tontolon'ny blaogy Bangla, miezaka mandrindra ny fanampiana ho an'io trangan-javatra io. (Sary natolotr'i Sujan)
Niantso ireo olom-pirenena bangla rehetra ny Blaogera Aurangzeb hanadino ny fahasamihafana ara-politika ary hiasa miaraka mba hanarenana ireo niharam-boina tamin'ny rivodoza. Naverin'ny blaogy korbojoy ireo teny sy fihetsehampony.
Notsindrian'i Nighat tithi fa efa imbetsaka i Bangladesh no niady tamin'ireo loza voajanahary – na izany, ireo tondradrano miverimberina, na ilay rivodoza nahafaty tamin'ny taona 1991 na i Sidr amin'izao fotoana izao (2007).
Raha mbola hitohy hatrany ny tolona ato anatin'ny andro vitsy ho avy, niangavy ny rehetra ilay blaogera mba hanao izay vitany ho an'ireo niharam-boina ankehitriny vokatr'i Sidr. Nampahafantarin’ i Ishtiaq Rouf taminay ny fomba nanangonan'ireo Bangladeshi mpianatra avy ao Virginia Tech ny fanampiana avy amin'ny Paypal ary ny fomba hahafahan'ireo hafa mandefa ny fandraisany anjara ho amin'ny fanampiana mitovy amin'io. Blaogera hafa toa an-dry Irteza, Addabaj sy Biborno Akash ihany koa nitondra ireo rohy fanampiny ho an'ireo fikambanana/ tranonkala izay ahafahan'ny tsirairay manao fanampiana ho famonjena raha misy loza voajanahary. Niresaka mikasika ny filàna fanaovana fanentanana sy fanamafisana ny fahatsiarovantena i Farukh Wasif , mikasika ireo sosokevitra isankarazany momba ny asa famonjena / fanampiana mifandraika amin'ireo loza voajanahary.
Fanampin'izany, nanisy rohy nankamin'ny lahatsary iray amin'ny blaogy (En), nataon'i Sheril Kirshenbaum, i Biborno Akash, izay nangatahan'ny tanora iray mpahay ny biolojia an-dranomasina, avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Duke, Etazonia, tamin'ireo mpijery mba hanatevina laharana amin'ny asa fanarenana.
Etsy andaniny, tonga saina ilay blaogera Tirondaz fa mbola niankina betsaka tamin'ny fanampiana iraisam-pirenena i Bangladesh isaky ny mitranga ny loza voajanahary, raha toa i India mpifanolo-bodirindrina aminy miezaka tsikelikely mahazo hery hiatrehana an'ireo loza ao aminy – sahala amin'izay nataony fony nikapoka ny firenena ny tsunami tamin'ny taona 2004. Manantena izy fa ho avy tsy ho ela ny fotoana izay hahavitan'i Bangladesh tena koa, toa an'i India mikasika ireny olana ireny.
Ny sehatra fanaovana blaogy Bangla Somewherein, miaraka amin'ny Save the Children, no nandefa fanentanana “Jagoron” nampiasàna ny SMS (izay midika ara-bakiteny hoe “ny fifohazana”) mba hahafahan'ireo olona monina ao Bangladesh ho tonga hanampy an'ireo niharam-boina vokatry ny rivodoza Sidr.
Toy izao ny fiasan'ilay fanentanana:
Mitendry ny hoe SAVE ilay mpampiasa finday ary mandefa SMS any aminà nomerao nomena. Misanda Bangladesh Taka (BDT)2 ny SMS tsirairay. Avy eo, manampy maribola ny Somewherein sy ireo mpanohana hafa, ankehitriny efa 15BDT (sary mivoatra arakaraky ny zavamisy io, izay hitombo hatrany hatrany isaky ny misy mpanohana ara-bola bebe kokoa tonga manatevina laharana ilay fanentanana) isaky ny BDT2 teraka avy amin'ireo SMS ary ny fitambaran'ny vola dia arotsaka ao amin'ny tahirimbolan'ny Save the Children Cyclone Relief.
Ho an'ireo izay monina ivelan'i Bangladesh, miangavy azy ireo ny Somewherein mba handefa ny fanampian'izy ireo mivantana ho any amin'ny tahirimbolan'ny “Save the Children Cyclone Relief” satria ho an'ireo mponina eo an-toerana irery ihany no miasa ny SMS.